Ny tontolon' IkalaFanja: avril 2014
Publié par Ikala Fanja à 09:51 17 commentaires:
#Marie Roland Ralolabe Razafimahefa, raha mpanoratra aho dia inoako fa nahavita tononkalo ho fahatsiarovana anao, ho mariky ny fahalasananao izao anio izao. Saingy indrisy, olontsotra aho ka tsy nahavita na dia andalana tokana ihany. Na izany rehetra izany aza anefa, tsy haiko ny hangiana, ka aleoko mirediredy eto ihany, eto aminin'ity tontoloko, hizarako ny tolokoko.Manjombona ny lanitro, fa nihena iray indray ny mpanakanto namako akaiky, fa lasa nody mandry ianao namana tsy mahafoy ....
Misavasava ny tahiry aho, fa tsy mba manana na dia sary iray aza niarahantsika. Indrisy... Lesoka tsy hita hoharenina. Soa ihany anefa, mbola voatahiry ato ampoko ireny sangisangy (.."tanàna ve...?"...) sy ireo mozika tsy voatanisa ahatsiarovako anao. Gina aho izany, mbola tsy mety mino ihany... Nahoana loatra lahy..
Mirediredy toy ny very saina eto aho, mijery ireto sarinao, tsy mampino tsotr'izao ;(
Hany hery, mivavaka mangiana, i Kristy anie hitsena anao ry #Ralolabe, hianoka mozika miaraka amin'ireo Anjely anie ianao. Mandria ampiadanana ry sakaiza. Tsy hanadino anao izahay.
Mirary fiononana feno ho an'i Ramatoa Isabelle sy ireo taranak'i #Ralolabe ary ny fianakaviany manontolo.
Ny vatany no lasa, ireo hira sy mozika rehetra nosoratany mbola hokaloina hatrany hatrany... Tsy ho faty mandrakizay ianao.
Publié par Ikala Fanja à 14:55 4 commentaires:
Malagasy aho, tiako ny teniko, betsaka ny zava-tsoa tsy ahafoizako ny taniko fa indrindra mamiko loatra ny sakafo malagasy! N'aiza n'aiza misy ahy, mbola hafa foana, mbola tsy mena mitaha amin'ny hafa ny vokatry ny taniko. Akory ny hafaliana rehefa indro misy vahiny tonga mian-trano ka mitondra voandalana: sakafo malagasy, ny kabaro, tsaramaso, sakay, ny angivy sy ny anana isan-karazany. Fa mba tena miavaka loatra hoy aho ny ravitoto, tena tsy manam-paharoa, ilay nototoina tanana, tamin'ny laona sy fanoto. Lazaiko fa tsy manan-tsahala.
Manina anao ry gasikara, vao maika mifikitra an-doha, manin-te hody aho nefa tsy afaka manoatra ihany koa. Vetsovetso no alefa eto ampitanehan'ito vokatry ny tany fa vetivety dia hisinda izany alahelo izany.
Efa akaiky ny fotoana, indro hisonanika anatin'ny mamy, oran'ny sakafo ;)
Saingy indrisy hoy aho, hifonaka eto fa efa naka fahazarana kely, nolovaina avy amin'ireto mpanjanaka taloha, mba haroso aloha ny fanokafam-bavony hampangitangitaka ny anaty rehetra, lasary karaoty izao no misy, hifaliana aloha izay an-tanana
Fa fotoana fohy monja no lany tamin'iny haitraitra iny, ndeha hiditra lalina amin'ny tena fototry ny hery, ny ravitoto sy henakisoa, marina raha mba misy hitraka eto aloha. Mbola hanampy, mbola hasiana laoka ravitoto fanindroa ihany koa.
Rehefa voky tsara, sento tokana ihany, any ianao izay ry Gasikara, matsiro loatra any izany sakafo izany. Aleo ary ho faranana ny fety, mba hoasiana kaoatry vetivety :) Mba atao tapany anie azafady e! Dia mba ataovy be ronono :)
Publié par Ikala Fanja à 12:51 10 commentaires:
Manakory e :)
Indray andro aho nitsangatsangana toy ny mahazatra, toy ny fanaon'ny olona rehetra rehefa miala sasatra iny ny alahady, mba mandehandeha kely maka rivotra hono izany, tamin' izay tany anaty ala no naleha, dia namelatra lamba mba hitsotra sy hankafy ny voary. Fa tena saika resin-tory ihany, efa rendremana mihitsy aza moa e! dia tonga saina dia nitsangana e! Nijery manodidina dia gaga teo, hay tsara be ny bozaka maina, zany tokoa? Eny... lasa ary izao, toy ny zazakely, nanapatapaka bozaka fa tsy maintsy entiko mody ireo androany...
Nanomboka teo, isaky ny mivoaka ny trano haka rivotra dia lasa fahazarana ity manapatapaka zavamaniry eny amoron-dalana ity. Tsikitsiky lalandava no mameno ny tontolo vao mahita an'ireo " voninkazo dia" ato an-trano, sady manitra anie izany no mahafinaritra ery jerena
Publié par Ikala Fanja à 12:49 4 commentaires:
Tonga soa eto amin'ny tontolon'i IkalaFanja, hizarako ny fahitako ny fiainana, ho feno tsiky ny lalantsika, ireo lesoky ny lasa nanovozako ny soa no andeha ho tantaraiko ndrao hisy tombony ho anao koa.
Welcome to my blog IkalaFanja's Land, I want to share with you guys my view of this life and how i face to it with all of hapiness and so much smile
Publié par Ikala Fanja à 08:35 2 commentaires: